Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday : Mbola noho ny kolikoly ihany
Inty sy nday : Mbola noho ny kolikoly ihany
Isan’ny fepetra noraisin’ny fitondram-panjakana ankehitriny eo anivon’ny ministeran’ny Raharaham-bahiny ny fanolosoloana an’ireo mpiasam-panjakana any anivon’ny masoivoho Malagasy any ivelany. MIiandimby sy mifanolosolo fa tsy mijanona ampolon-taonany eo amin’ny toerany any ivelany any izy ireny. Marina tokoa fa misy amin’ireo mpiasam-panjakana any amin’ny masoivoho Malagasy any ampita any no naharitra 15 na 20 taona mihitsy aza. Ireo mpiasam-panjakana ao anivon’ny ministeran’ny Raharaham-bahiny eto an-toerana koa dia mba afaka misahana an’ireny asa any ivelany ireny. Noho izany, tsy maintsy nampodiana ireo any ampita aloha dia hojerena ny fanendrena vaovao.
Indraindray koa dia misy tsy mpiasam-panjakana tany amin’ny ministeran’ny Raharaham-bahiny akory ny sasany no avy dia alefa miasa any amin’ny masoivoho any ivelany any. Ny masoivohom-panjakana na “Ambasadaoro” ihany, angamba, no tsy voafehin’izay fepetra hoe “tsy maintsy mpiasam-panjakana tao amin’ny ministeran’ny Raharaham-bahiny izay.”
Rehefa fotorina ny antony mahatonga ny mpiasam-panjakana sasany haharitra maherin’ny 10 taona miasa any amin’ny masoivoho any ampita any dia noho ny kolikoly sy tsikombakomba maloto amin’ny manam-pahefana ambony ara-panjakana aty an-tanindrazana. Mandoa vola saika isam-bolana ho an’ny minisitra na tompon’andraikitra ambony hafa.
Rariny sy hitsiny io fepetra io, fa rariny sy hitsiny koa raha olona mahafehy ny asa no tena ampisahanina azy fa tsy noho ny antony hafa, toy ny hoe “namana amin’ny antoko pôlitika, na mpiray fiaviana, na mpiray fiangonana, na fianakaviana…”